Njani bale mihla abaqondisi-mthetho iyakwenza Ngakumbi njengoko Abacebisi - HuffPost
Isemthethweni iinkonzo aren khange njengoko sika kwaye dried njengoko baya kusetyenziswa ukuba abe. Eneneni, abaqondisi-mthetho ingaba kujike ethabatha a ezintshana i-engile ngenxa yabo career: indawo consultancy.
Ngamanye amaxesha, oku kuthetha encinane-ifemi lwahlulelwano phakathi attorneys kunye efanayo isiqalo ngamanye amaxesha, baye bazibandakanya enkulu amakhulu ukuze ube dozens okanye nkqu amakhulu abaqondisi-mthetho zokusebenza emva scenes. Nangeyiphina indlela, xa abantu abaninzi bafuna isemthethweni iinkonzo, la ngamazwi organizations baya ngokuqhelekileyo cinga kuqala ngoba apho abaqondisi-mthetho ezininzi imibuzo gravitate. Kodwa ngaphezu experienced abaqondisi-mthetho ingaba iqala ukuba veer ukususela kweli ucwangciso abaxhasayo a ngakumbi elizimeleyo kokubonisana indlela.
I indawo isemthethweni consultant kubaluleke kakhulu kodwa flexible
Ezinye shifts kwi-bume kwaye imisebenzi enxulumene ne-transition zibe obvious, kodwa utshintsho ingaba okuthile ngokusekelwe iimeko. Ngamnye lamagqwetha abo umse isemthethweni kokubonisana uza kufumana ukukhetha uxanduva lowo okanye yena kuthatha njalo. Ezinye ezi ziquka: Ngokuqhelekileyo, isemthethweni abacebisi noba kwentlawulo kwi-i-iiyure qho ngonyaka okanye kufuna ezinye uhlobo retainer imali kuba iinkonzo zabo.
Oku kanjalo phezulu ukuya consultant ke yedwa
Isemthethweni iingcali abo shiya a ifemi okanye corporation ukuqala kwezabo elizimeleyo msebenzi bonwabele eziliqela ecacileyo okuninzi: kunjalo, kukho ezinye disadvantages ukuba akhaphe ezi. Uza kuphulukana nayo ezinye uzinzo a ifemi inikezela, ingakumbi xa oko iza umvuzo kwi-kwangoko stages yakho consultancy. Uzaku kanjalo encounter kwiimeko apho kuza kufuneka ngakumbi iinkalo zobuchule okanye ngakumbi zokusebenza, apho kumzekelo i uza kuba ukuba enlist iinkonzo ngomnye lawyer okanye femi e a iindleko. Kodwa kukho ezinye iqhosha okuninzi kuba abaxhasi abasweleyo ka-ingcebiso ngaphandle lwabiwo-mali okanye umnqweno ukumsukela a isemthethweni ifemi: Ekugqibeleni, ukukhula neenkqubo zomthetho abacebisi yi into elungileyo kuba jikelele isemthethweni-bume. Umthetho firms babe? akuzigwagwisa abanye enkulu okuninzi, baza bahlala i-kubalulekile gqibezela le isemthethweni ecosystem, kodwa isemthethweni abacebisi unako ukunceda ukuzisa ngakumbi ungqinelwano kwaye anike ngakumbi rounded iinkonzo kuba abaxhasi abo khetha kwabo. Ukuba ukhe ubene ngoku ukusebenzela enkulu ifemi kwaye nisolko ngaphantsi uvuma kunye nemiqathango, kungani na ukuba malunga carving eyakho niche njengokuba consultant
JAPAN: - visa, immigration, incorporation, ofisi inkangeleko